Hotel For Sale – Nay Chi & Lamin Myanmar Real Estate
ပြည်မြို့ရှိဟိုတယ်ရောင်းမည်။ Bago division. Lakhs 14,700.00
ပြည်မြို့ရှိဟိုတယ်ရောင်းမည်။ Bago division.
ပြည်မြို့ရှိဟိုတယ်ရောင်းမည်။ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရှိပြီး လက်ရှိလုပ်ငန်းလည်ပတ်လျှက်ရှိသော ဟိုတယ်။ တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းပြီး အနားယူရန်ကောင်းပါသည်။ ဂရန်အမည်ပေါက်ဖြစ်သည်။ ပေ ၁၅၀ *၂၀၀ တွင် ၄ ထပ် RC ဆောက်လုပ်ထားပြီး အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး ဟိုတယ်အခန်း ၃၄ ခန်: ပါရှိပါသည်။ Each room has -1.5 HP aircon -Refrigerator -40″ or 32″ flat TV -Electric Kettle -Cabinet -Hot/Cold Shower & Bathtub -roof top restaurant 14700 သိန်း။ ဆက်သွယ်ရန်။ Nay chi & La min Real Estate Ph: 09 793158939, 09 […]
30000 sq ft 34 beds 36 baths
Motel for sale, Nyaung.Oo, Mandalay. Lakhs 6,500.00
Motel for sale, Nyaung.Oo, Mandalay.
ပုဂံညောင်ဦးမြို့ရှိ မိုတယ် အထူးစျေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းမည်။ လက်ရှိလုပ်ငန်းလည်ပတ်လျှက်ရှိသော မိုတယ်။ 2400 စတုရန်းပေ။ ဂရန်အမည်ပေါက်ဖြစ်ပါသည်။3ထပ် RC ဖြစ်ပြီး အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး ဟိုတယ်အခန်း 15 ခန်:ပါရှိပါသည်။ ကိုဗစ်မတိုင်မီလုပ်ငန်းလည်ပတ်သော ခရီးသွားရာသီချိန်တွင် နေ့စဥ် ကျပ်5သိန်းဝန်းကျင်ဝင်ငွေရှိသောမိုတယ်။ 6500 သိန်း။ ဆက်သွယ်ရန်။ Nay chi & La min Real Estate Ph: 09 793158939, 09 795727121 Viber: 09 443139801 www.myanmar-realestate.com
2400 sq ft 15 beds 17 baths